Khatarte intee le'eg ayey leedahaye Taalladaada Tech | Martech Zone
Saameyn intee le'eg ayay noqon doontaa haddii munaaraddaada tiknoolajiyaddu ay dhulka ku soo dhacayso? Waa fikrad igu dhacday dhowr Sabti ka hor maadaama caruurtaydu ciyaarayeen Jenga intii aan ka shaqeynayay soo bandhigid cusub oo ku saabsan sababta ay suuqleyda uga fikirayaan xirmooyinka tiknoolajiyadooda. Waxay igu dhufatay in xirmooyinka tiknoolajiyada iyo munaaradaha Jenga runtii ay waxyaabo badan ka wadaagaan. Jenga, dabcan, waxaa lagu ciyaaraa iyadoo lagu uruurinayo alwaaxyo alwaax ah illaa ay wax walba ka soo dhacayaan. Lakab kasta oo cusub oo lagu daro, salka ayaa sii daciifaya eventually aakhirkiina munaaraddu way soo dhacaysa. Nasiib darrose, xirmooyinka tiknoolajiyada ayaa u nugul si la mid ah. Marka lakabyada lagu daro, munaaraddu way sii daciifaysaa waxayna soo bandhigeysaa khatar aad iyo aad u badan.
Maxay u xiiseyneysaa tiknoolajiyad badan?
Hagaag, hadalkaas aan kor ku soo xusay ee aan ka shaqeynayay - Waxaan dhawaanahan ku faraxsanaa inaan ku soo bandhigo goobta Dukaan shir ka dhacaya Las Vegas. Waxay lahadashay kaqeybgalayaasha, waan aaminsanahay, maxaa yeelay waxay ahayd mid aad uga duwan waxa dad badan oo suuqleyda ah iyo kuwa wax iibiya ay maanta wacdinayaan. Si kastaba ha noqotee, adduunkeenu wuxuu ka kooban yahay farriimo ku saabsan sida iyo sababta aan ugu baahanahay tiknoolajiyad BADAN. Xaqiiqdi kama yara. Iyo sida tikniyoolajiyadda, aan annaga oo ah hal abuur iyo suuq istiraatiijiyad u ah, ay u tahay xalka dalabaadka sii kordhaya ee ganacsiyadayada iyo kordhinta rajooyinka laga qabo macaamiisha.
Maaddaama aan dhammaanteen si joogto ah u duqeyneyno qaddar fara badan oo fariin ah oo ku qaylinaya suuqleyda si aan u kobcino xirmooyinka tiknoolajiyadayada, waxaan kaa codsanayaa inaad daqiiqad qaadato oo aad runtii ka fikirto oo aad la tartanto. Fikraddan oo ah in tiknoolajiyad dheeri ah oo aan ku darno xirmooyinkayaga, sida ugu fiican ee aan noqon doonno, ay tahay cillad. Xaqiiqdii, runti runti waa iska soo horjeed. Markay sii kala duwanaato hodgepodge-kaaga qalabka, softiweerka, barnaamijyada, iyo nidaamyada kaladuwan, waxay noqonaysaa waxqabad la'aan, kharash, iyo halista aad u soo bandhigto ururkaaga.
Qaar ka mid ah suuqleyda waxay eegaan muuqaalka martech waxayna raadiyaan inay isticmaalaan inta badan qalabkan sida ay u maleynayaan inay awoodaan ama ay tahay. (Xigasho: Martech Maanta)
Ma ogtahay in inta badan suuqleydu ay adeegsadaan in ka badan nus dersin tiknoolajiyad? Xaqiiqdii, 63% maamulayaasha suuqgaynta waxay yiraahdaan kooxdooda waxay adeegsadaan meel udhaxeysa lix illaa 20 qaybood oo teknolojiyad kaladuwan, sida uu sheegay Conductor
Source: 500 Hawl-fuliyayaal Suuq Geyn Ah Oo Soo Bandhigay Istaraatiijiyadooda 2018, Hagaha
Waxaa jira cudur faafa oo faafa oo suuq galiya sida daacuunka. "Shadow IT" iyo khataraha la xiriira si fudud looma indha tiri karo mar dambe.
Hooska IT-ga iyo halista uu xanbaarsan yahay
Arrimaha qaarkood ayaa hoos ugu dhaca hooska marka codsiyada ama aaladaha cusub ay ka soo muuqdaan kaabayaasha shirkadaha iyada oo aan laga qayb gelin oo aan laga helin IT-ga. Kani waa Shadow IT. Ma taqaan ereyga? Waxay si fudud loola jeedaa tiknoolajiyada la keenay urur iyada oo aan ku lug lahayn IT-ga.
Shadow IT wuxuu soo bandhigi karaa khataraha amniga ururada, iswaafaq la'aanta u hoggaansamida, qaabeynta iyo khaladaadka qalabixinta, iyo inbadan. Iyo, runtii, softiweer kastaa wuxuu noqon karaa Shadow IT… xitaa kan ugu amniga badan, aaladaha aadka loo tixgeliyo iyo xalka. Sababtoo ah maahan tiknoolajiyadda, lafteeda. Waxay ku saabsan tahay xaqiiqda in IT aysan ka warqabin in la keenay ururka. Iyo, sidaa darteed, ma noqon karto mid fir-fircoon ama deg-deg ah in looga jawaabo markii tikniyoolajiyaddan ay ku lug leedahay jebinta, jabsiga, ama arrin kale - si fudud maxaa yeelay ma oga inay ku dhex jiraan darbiyada shirkadda. Ma kormeeri karaan wax aysan ogayn inay jiraan.
Qaar ka mid ah codsiyada ugu caansan ee la rakibo iyada oo aan la helin oggolaanshaha IT-ga waxaa ka mid ah wax soo saar u muuqda waxyeello la'aan iyo barnaamijyada nidaamka.
Talo Pro: Kuwani ma aha qalab "xun". Xaqiiqdii, waxay caadi ahaan yihiin kuwo ammaan ah oo ammaan ah. Xusuusnow in xitaa barnaamijyada iyo barnaamijyada si ballaaran loo aqoonsan yahay ay noqon karaan Shadow IT. Dhibaatadu kuma xirna tiknoolajiyada, lafteeda, laakiin taa beddelkeeda ka-qaybgal la'aanta IT. Haddii aysan ogeyn in kuwan ama tiknoolajiyaddan kale la keenayo ururka, ma maamuli karaan ama kormeeri karaan khataraha ka iman kara. Farsamo kasta oo cusub, si kasta oo ay u yar tahay, waa inay ku jirtaa radar-ka IT-da.
Laakiin aan eegno saddex ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee loo yaqaan 'Shadow IT' iyo xirmooyinka waaweyn ee teknolojiyadda ayaa adiga iyo kooxdaada gelinaysa nuglaanta iyo khatarta ugu weyn.
Waxqabad la'aan iyo shaqo ka fadhiisis - Qeybo badan oo teknolojiyad ah - xitaa barnaamijyada wax soo saarka, nidaamyada wada sheekaysiga gudaha, iyo hal-ka-bixidda “dhibic” - macnaheedu waa waqti dheeraad ah ayaa loo baahan yahay si loo wada maareeyo dhammaantood. Farsamooyin iyo qalab fara badan ayaa abuuraya u baahan suuqleyda inay u adeegaan sidii maamuleyaal isdhexgal teknolojiyadeed, fududeeyeyaasha xogta, ama maareeyayaasha faylka CSV. Tani waxay qaadataa waqti ka dib oo ay ahayd oo ay ahayd in lagu bixiyo halkii hal-abuurka, istiraatiijiyadda aadanaha ee suuqgeynta. Ka fikir waxa ku saabsan… meeqo meelood oo aad maalin kasta u adeegsato inaad ku qabato shaqadaada? Waqti intee le'eg ayaad ku qaadataa inaad la shaqeyso qalabkan ka soo horjeedka istiraatiijiyadda wadista, abuurista waxyaabo ku kalifaya, ama wadashaqeyn la leh dadka kula shaqeeya. 82% iibka iyo xirfadleyda suuqgeynta ayaa lumiya illaa saacad maalintii kala beddelka aaladaha suuqgeynta Maxaa tirakoob cabsi leh kani yahay markii aad tixgeliso tani inay lamid tahay 5 saacadood toddobaad kasta. 20 saacadood bil kasta. 260 saacadood sanad kasta. Dhamaan ku qaatay maaraynta farsamada.
Kharashyada aan lagu talagalin - Celceliska suuqyadu wuxuu adeegsadaa in ka badan lix aalad tiknoolaji ah si ay shaqooyinkooda u qabsadaan. Madaxdoodu waxay adeegsadaan laba ilaa shan dashbood oo kale iyo qalab warbixineed si ay u fahmaan sida kooxahoodu wax u tebinayaan. Tixgeli sida kharashka qalabkani isu geyn karo (waana wax ka badan mugga uun):
eryis: Qaar badan oo ka mid ah qalabkani waa kuwo aan loo baahnayn, taas oo macnaheedu yahay inaan bixinayno qalab badan oo isla waxyaabahaas sameeya.
Kordhinta: Badanaa, waxaan u keennaa tiknoolajiyad ujeeddo gaar ah, waqti kadib, waan ka dhaqaaqeynaa baahidaas… laakiin waxaan sii haysannaa tikniyoolajiyadda, si kastaba ha noqotee, waxaanna sii wadeynaa inaan kharashkeeda galno
Farqiga Korsashada: Tilmaamo badan oo ay soo bandhigaan madal ama qeyb tiknoolajiyad ah, KHUDBADDA waxaad u baahan tahay inaad dhammaantood korsato. Waxaa jira sifooyin iyo hawlo ka fudud kuwa kooxda caadiga ahi baran karaan, korsan karaan, kuna hirgelin karaan hawlahooda. Marka, inta aan iibsanno dhammaan dawannada iyo foorida, waxaan kaliya ku dhammaaneynaa isticmaalka boqolkiiba in yar oo ka mid ah muuqaalada aasaasiga ah… laakiin weli waxaan bixinnaa xirmada oo dhan.
Sirta xogta / ilaalinta iyo halista urur - Tikniyoolajiyadda badan ee la keeno urur - gaar ahaan taas oo ah Shadow IT - khatarta badan ayaa lagu soo rogaa iyada:
Weerarada internetka. Sida laga soo xigtay Gartner, sanadka 2020, saddex meelood meel ka mid ah weerarada cyberattacks ee lagu guuleysto ee ka dhanka ah shirkadaha waxaa lagu gaari doonaa iyada oo loo marayo codsiyada Shadow IT.
Xadgudubka xogta. Jebinta xogta waxay ku kacdaa shirkad caadi ah qiyaastii $ 3.8 milyan.
Kooxdaada IT-ga waxay leeyihiin habab, borotokollo, nidaamyo, iyo habab ilaalin oo loo yareeyo khatarahaas. Laakiin ma noqon karaan kuwo firfircoon ama dhaqso wax uga qabta marka ay khataro ka dhashaan teknolojiyad aysan ogayn inay ka dhex jirto ururka.
Marka, maxaan samaynaa?
Waxaan ubaahanahay isweydaarsi wada jir ah, midka badalaya sida aan u aragno hirgelinta tiknoolajiyada oo naga qaadaysa maskaxda "balaadhinta" una wareejinayo mid ka mid ah "xoojinta." Waa waqtigii dib loogu laaban lahaa aasaaska.
Sideen wax u goyn karnaa, halkee ayaan ka waafajin karnaa shaqooyinka, iyo sidee u baabi'in karnaa qalabka aan loo baahnayn?
Waxaa jira dhowr tallaabo oo aad qaadi karto si aad u bilowdo.
Ka bilow himilooyinkaaga - U laabo aasaaska Suuqgeynta 101. U dir dhinaca farsamada dhinaca kana fikir kaliya waxa kooxdaadu u baahan tahay inay ku guuleysato si ay uga caawiso meheraddu inay gaarto ujeeddooyinkeeda. Maxay yihiin yoolalkaaga suuq-geyn? Inta badan, waxaan ka bilownaa tikniyoolajiyadda oo waxaan ka soo laabannaa halkaas xeeladaha suuq-geynta ee toos ugu tegaya tikniyoolajiyadeena. Fikirkani waa gadaal. Marka hore ka fikir waxa ujeedooyinkaagu yihiin. Teknolojiyada ayaa hadhow imaan doonta si ay u taageerto istiraatiijiyaddaada.
Hantidhowrka farsamadaada - Isweydii su'aalahan ku saabsan tiknoolajiyadaada iyo sida kooxdaadu ula macaamisho:
Miyaad si wax ku ool ah u fulineysaa istiraatiijiyad suuq geyn ah omnichannel? Immisa qalab ayey qaadataa?
Waqti intee le'eg ayaad ku qaadaneysaa maaraynta tikniyoolajiyaddaada?
Immisa lacag ah ayaad ku bixinaysaa dhammaan tiknoolajiyadaada?
Xubnaha kooxdaada ma isticmaalayaan waqtigooda maaraynta tikniyoolajiyadda? Mise waxay ka faa'iideysanayaan qalabka si ay u noqdaan istiraatiijiyad badan, suuqgeyaal hal abuur leh?
Farsamadaadu ma adiga ayey kuu shaqaysaa mise adigu waxaad u shaqaysaa farsamadaada?
Raadso Tech Tech for Strategy - Kaliya marka aad dejiso himilooyinkaaga, baarto tiknoolajiyadaada, iyo sida kooxdaadu ula macaamilayso waa inaad bilowdaa inaad tixgeliso nooca tikniyoolajiyadda aad ugu baahan tahay inaad ku keento istiraatiijiyaddaada nolosha. Xusuusnow, farsamadaadu waa inay kordhisaa dadaalka adiga iyo kooxdaada. Maaha tan kale. Annaga, dabcan, waxaan haynaa talooyin ku saabsan sida loo doorto tikniyoolajiyadda saxda ah, laakiin ugama rogi doono qodobkaan goob iib ah. Talada ugu fiican ee aan siin doono ayaa ah tan:
Tixgeli inaad ku xoojiso xidhmooyinkaaga dhowr qaybood oo istiraatiiji ah intii suurtagal ah.
Faham sida farsamadaadu kaaga caawin doonto inaad fuliso istiraatiijiyad omnichannel ah.
Weydii sida farsamadaadu u mideyn doonto xogtaada xog ururin si aad uhesho aragti buuxa, midaysan oo macaamil walba ah IYO si wax ku ool ah uga faa'iideysato waxyaabaha sida AI iyo barashada mashiinka.
Wadaage IT - Markaad haysato istiraatiijiyaddaada oo aad sidoo kale aqoonsato farsamada aad u malaynayso inay kaa caawin doonto inaad si hufan u fuliso, la shaqee IT-ga si aad u hubiso una hirgeliso. La samee xiriir adag IT-ga si loo sameeyo nidaam toosan oo labadiinaba waxtar kuu leh. Markii aad wada shaqeysaan koox ahaan, waxaad heli doontaa teknolojiyadda ugu amniga badan, uguna waxtar badan ee sidoo kale ilaalisa shirkaddaada iyo xogta macaamiishaada.
Qalabka farsamada iyo xalalka ma ahan dhibaatada. Waa xaqiiqda ah inaan dhammaantood ku soo wada ururinnay xirmooyinka tiknoolajiyada Frankensteined. Teknolojiyaddu waxay noqotay ujeeddada, ee ma ahan macneheeda. Taasi waa dhibaatada.
Xaqiiqdii, barnaamijyada annaga (iyo aniga) aan u isticmaalno maalin kasta caadi ahaan waa kuwo ammaan ah oo aan dhib lahayn. Arrintu waxay soo baxdaa marka la adeegsado oo IT-gu aanu ka warqabin, marka mashiinnadu bilaabaan inay ku maareeyaan halkii ay ka ahaan lahaayeen dhinac kale, iyo xilliyadaas oo ay khatar ku yihiin nabadgelyada internetka.
Ugu dambeyntii, ikhtiyaarka ugu fiican waa midka udub-dhexaad u ah wax kasta oo aan runtii u baahanahay - hal, madal suuq mideysan.
Sida dhismo dhaadheer oo aan la burburin karin, dhisme joogto ah (hubaal ma ahan munaaradda Jenga ee qaybo aan la saadaalin karin), quruxda istiraatiijiyadeed, madal suuq geyn mideysan beddelkeeda farabadan oo qalab isku duuban ayaa cad. Waa waqtigii dib looga fakari lahaa tiknoolajiyaddaas.
Ku qabso PDF-gaaga dhammaystirka ah halka aan ku faahfaahin doonno Shadow IT, oo waxaan ku siinayaa waxqabadyo waxqabad leh oo lagu tirtirayo arrimahan! Ila xariir oo ii soo sheeg arimaha aad aragtay ama aad la soo kulantay farsamo aad u tiro badan, ama macluumaad dheeri ah oo ku saabsan sida loo xoojiyo dhamaan dadaaladaada suuq geynta dijitaalka ah iyadoo la adeegsanayo madal dhan-ka-mid ah oo si gaar ah loogu talagalay ganacsatada.
Download Maxaa Khatar ah oo ku dhuumaaleysan kara Tiknoolojiyaddaada?
Tags: kaariEmarsysitmuuqaalka tikniyoolajiyada suuq-geyntahalgankaxidhmooyinkhatartaammaankahoos hadhmunaaraddii tiknoolajiyadaxulashada iibiyeyaasha
Mudo intee le'eg ayay ku qaadataa Darajaynta Natiijooyinka Raadinta Google?
Productsup: Iskudarka Mawduuca Alaabada iyo Maareynta Quudinta